“ အော် မောင် ရယ် ´´ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “ အော် မောင် ရယ် ´´
“ အော် မောင် ရယ် ´´
“မောင် မနက်ဖြန်မနက် စောစောလေးထပါလားဟင် ဈေးစောစောသွားရအောင်´´
“ဘာလို့လဲ ခါတိုင်း ရုံးပိတ်ရက်ဆို စောစောမထပါဘူး ၈ နာရီလောက်မှ ထကြတဲ့ဉ္စာ´´
“နေ့လည်က ရုံးကိုအမေဖုံးဆက်တယ် မနက်ဖြန်ရုံးပိတ်ရက် မနက်ပိုင်းသမီးတို့ ဘယ်သွားစရာရှိလဲတဲ့၊ သွားစရာမရှိရင် အမေတို့ လာလည်မလို့တဲ့လေ၊ ဒါနဲ့ ငယ် ကလည်း အမေတို့လာလည်မယ်ဆိုတော့ ဝမ်းသာ သွားပြီး သမီးတို့ရှိမယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်လေ၊ အဲဒါ နေ့လည်စာ ထမင်းကျွေးမလို့ ဈေးစောစောသွား မလား လို့ပါ´´
“ငယ် ကတော့လုပ်ပြီ၊ နေလည်စာကျွေးချင်တယ်ဆိုလည်း တိုက်အောက်က ခေါက်ဆွဲစားသောက်ဆိုင်မှာ သွားကျွေးလိုက်လည်းရတာကိုး ဒါမှမဟုတ်လည်း မေနဲ့ဖေ ရောက်လာမှ ဟင်းစားသွားဝယ်လိုက်မယ်လေ တော်ကြာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မလာဖြစ်ရင် ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲ တနင်္ဂနွေတစ်ရက်ရုံးပိတ်လို့ အိပ်ရေးလေး ဝဝအိပ်ပါရစေဗျာ ´´
လို့ပြောဆိုပြီး ရေချိုးခန်းထဲကို ရေချိုးဖို့ဝင်သွားတဲ့ မောင် ကိုကြည့်ပြီး
“အော် မောင် ရယ်´´ လို့ဘဲ ကျမရေ ရွတ်မိလိုက်တယ်လေ၊ ပြီးတော့ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ ထိုင်နေတဲ့ရှေ့က နံရံကို ငေးကြည့်နေရင်း မျက်ဝန်းအစုံမှာ ဝဲလာဖြစ်တဲ့မျက်ရည်စတွေကို မျက်တောင်လေးပုတ်ခပ်ပုတ်ခပ်လုပ်က ထိုင်နေမိရင်း တစ်ခါတုန်းက ရည်းစားဘဝ အင်ယားကအကြော်ဆိုင်လေးမှာ ထိုင်စားဖြစ်တုန်းက ပြောဖြစ်ခဲ့ ကြတဲ့ စကားလေး တွေကိုပြန်သတိရမိလိုက်တယ်လေ။
“ ငယ် တို့ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးရင် မောင် တို့အိမ်မှာလိုက်နေရမှာလားဟင်၊ အဲလိုလိုက်နေရလို့ ငယ် ဖေနဲ့မေ လာလည်တဲ့အခါ မောင် ဖေနဲ့မေ ကကြည်ဖြူမှာပါနော်´´
“ငယ် ကလည်း မောင် တို့မင်္ဂလာဆောင်ပြီး နေဖို့ ကို ကမာရွတ်၊ မြကန်သာမှာ တိုက်ခန်းလေးတစ်ခန်းဝယ်ဖို့ ဈေးစကားပြောထားတယ်´´
“ဟင် ဟုတ်လား အရင်လည်း ဘာမှမပြောဘူးပါဘူး´´
“ဪ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ ရက်လောက်ကမှ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ညွှန်လို့လေ ပြီးတော့ ဈေးတည့် မတည့် မသေချာသေးလို့ပါ´´
“အဲဒီမှာ ငယ် တို့နှစ်ယောက်ထဲနေရမှာလား´´
“ဒါပေါ့ မောင် တို့နှစ်ယောက်နေဖို့လေ၊ အဲဒီကျရင် ငယ် ဖေနဲ့မေ လည်း ဘယ်အချိန်လာလည်လည် ရပြီး၊ အဲဒီ တိုက်ခန်းက အိပ်ခန်း ၂ ခန်း ပါတာမို့ ငယ် ဖေနဲ့မေ ညအိပ်တောင်လာလည်လို့ရသေးတယ်၊ ပြီး ဈေးသွား စားစရာတွေဝယ် ချက်ပြုတ်စားနဲ့ ငယ် ပျော်ရမှာသိလား´´
“တွေးပြီးတော့တောင် ပျော်လိုက်တာ မောင် ရယ်၊ မောင် ကအရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ် သိလား´´
အတွေးစလေးတွေ ပျံလွင့်ကာ လွမ်းနေတုန်း
“ငယ် ရေချိုးဖို့လုပ်တော့လေ ညစာထမင်းစား နောက်ကျနေအုံးမယ်´´ လို့ ရေချိုးခန်းကထွက်လာတဲ့သူ အသံကြောင့် ထိုင်နေရာမှ ထခဲ့မိတယ်ပေါ့။
ခါတိုင်းရုံးပိတ်ရက် တနင်္ဂနွေဆိုစောစောမထဖြစ်ပေမယ့်၊ ဒီနေ့ အမေတို့လာလည်မယ်ဆိုလို့ မျှော်တဲ့စိတ် ကြောင့်နဲ့တူတယ် မနက် ၆ နာရီကျော်လောက်ကထဲက အိပ်ယာနိုးလာလို့ ထခဲ့ပေမယ့် မောင် ကတော့ အိပ်မောကျကာ ဆက်အိပ်နေတယ်လေ။ ပြီးမျက်နှာသစ်ကာ တိုက်ခန်းရှေ့ ဝရန်သာကနေ လမ်းဆီကို မျှော်ငေးရင်း လမ်းသွားလာတာတွေကို ကြည့်နေဖြစ်တယ်၊ ကျမတို့ နေတဲ့တိုက်ခန်းက ၃ လွှာမှာဖြစ်နေလို့ ပြီးတော့ အများသုံးဘုံလှေကားရဲ့မြေညီထွက်ပေါက်က သံပန်းတံခါးကလည်း သော့ခတ်ထားသဖြင့် တိုက်အောက်ခြေရောက်ရင် ဝရန်တာမှချထားတဲ့ကြိုးကိုဆွဲတော့ ခေါင်းလောင်းလေးမြည်ကာမှ မြေညီသံပန်း တံခါးသော့လေးချပေးရမှာမို့လေ။ အဲလို ကြည့်နေတုန်းအဌားကားလေးတစ်စီး တိုက်အောက်ခြေမှာ ကပ်ပြီး ရပ်လိုက်တာမို့ ဖေနဲ့မေများလားလို့လှမ်းပြီးငုံကြည့်လိုက်မိတယ်ဆိုရင်ဘဲ ရှေ့ခန်းက အဖေဆင်းလာတာတွေ့ တာနဲ့ ကျမတံခါးသော့တွဲလေးဆွဲပြီး တိုက်အောက်ကိုလှေကားကနေ အပြေးလေးဆင်းခဲ့မိတယ်လေ။
“ ဖေနဲ့မေ ´´ လှေကားမြေညီထွက်ပေါက် သံပန်းတံခါးလေး သော့ဖွင့်ရင်း မင်္ဂလာဆောင်ပြီး တစ်လ မပြည့်မှီ် မှာဘဲ ဖေနဲ့မေ ပထမဆုံးကျမတို့ နေတဲ့အိမ်လာလည်တာမို့ ဝမ်းသာအားရအော်မိလိုက်တယ်လေ။ ဖေနဲ့မေနား ရောက်တော့မှ ၅ ပိဿာဝင်ပဲဆီပုံးတစ်ပုံးနဲ့ ဆန်အိတ်တစ်အိတ် ဘေးနားမှ အဌားကားပေါ်ကချ ထားတာတွေ့ရ လို့ “ အဲဒါတွေက ဘာလို့ယူလာတာလဲ ´´ မေးလိုက်တော့ အမေက “ သမီးတို့က တိုက်ပေါ်မှနေကြတာ မို့ လက်လီဝယ်ပြီးဆွဲနေရမှာရယ်၊ အခုမှ သမီးကမိဘနဲ့ အိမ်စခွဲပြီးနေရတာလေ တော်ကြာ ထမင်းချက်ခါနီးမှ ဆန်ကမရှိ၊ ဟင်းချက်ခါနီးမှ ဆီကလို ဖြစ်မှာစိုးလို့ မေ တို့လာလည်တုန်းယူခဲ့ တာလေ´´ ပြောတော့ “အော် အမေရယ်´´ ဆိုပြီး အမေကိုခဏလေး စိုက်ကြည့်မိသွားတယ်လေ၊ ဒါနဲ့ ဘေးဘယ် ကြည့်လိုက်တော့ သစ်ဆိုင်မှာလုပ်တဲ့ကောင်းလေးကိုလှမ်းတွေ့တာနဲ့ ကျမတို့နေတဲ့ တိုက်ခန်း ၃လွှာကို ဆန်အိတ်ထမ်း ပို့ပေး ပါလို့ အကူညီတောင်းတော့ ကောင်းလေးကပို့ပေးတာနဲ့ ဆီပုံးလေးဆွဲပြီး တိုက်ခန်းဆီတက်ခဲ့ပေါ့၊ ဖေနဲ့မေ လည်းနောက်ကလိုက်လာလို့“ဖြေးဖြေးတက်ခဲ့နော်´´ လှမ်းပြောဖြစ် တယ်ပေါ့။ အပေါ်တိုက်ခန်းရောက်တော့ မီးဖိုခန်းမှာ ထမ်းလာတဲ့ကောင်းလေးက ဆန်အိတ်ကိုချတဲ့အခါ “အုန်း ´´ လို့ အသံကျယ်သွားတော့ “ ငယ် ဘာဖြစ်တာလဲ လို့´´ အမေးအသံနဲ့ အတူ မောင်နိုးလာခဲ့ တယ်လေ။ ဒါနဲ့ “ဘာမှမဖြစ်ဖူး ဖေနဲ့မေ လာလည် တာ ဆန်အိတ်နဲ့ဆီ ယူလာပေးလို့ ဆန်အိတ်ချရင်း အသံမြည်တာ´´ လို့လှမ်းပြောရင်း ကူညီပေးတဲ့ကလေးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းးပြောရင်း လဘက်ရည် သောက်ဖို့ဆိုပြီးငွေလေးပေးပေါ့။ အဲဒီချိန်မှာဘဲ ဖေနဲ့မေ လည်း တိုက်ခန်း ထဲဝင်အလာတဲ့အခါ မောင် က-
“ ဖေနဲ့မေ စောစောစီးစီးရောက်လာတယ်နော်၊ ဘာလို့ဆန်တွေဆီတွေလုပ်လာတာလဲ အလုပ်ရှုပ်ခံ လို့ဗျာ၊ မနက်စာအတွက် ကျွန်တော်တစ်ခုခုသွားဝယ်လိုက်မယ်လေ ငယ် ရေ ဖေနဲ့မေ အတွက် ကော်ဖီ လေးလုပ်အုံး လေ´´ ဆိုတော့ အမေ က-
“ အမေ တို့ မနက်စာ စားခဲ့ပြီးပြီ၊ သားတို့အတွက် ဆန်ဝယ်ရင်းဈေးထဲက ခေါက်ဆွဲသုတ်ဝယ်လာတယ် စားလိုက်ကြအုံး ´´ ဆိုပြီး ဝယ်လာတဲ့အထုပ်လေးတွေ လှမ်းပေးတာကို မောင် ကယူရင်း မနက်စာပြင်ဆင်လို့ စားကြရင်း စကားပြောကြတဲ့အခါ မောင် က –
“ ဖေနဲ့မေ ဒီည ဒီမှာဘဲအိပ်ပြီး မနက်မှပြန်ပေါ့ တစ်ခါတလေလာလည်တာ ရောက်တုန်းအေးဆေးပေါ့ ´´
ပြောတော့ မေက သားတို့အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်၊ နေပါ့စေ နေ့လည်လောက်ပြန်တာပေါ့ပြောပေမယ့် ကျမက လည်း“ ဟုတ်သားဘဲမေရယ် ရောက်တုန်းအေးဆေးနေသွားပါလား ´´ ဆိုတာလို့ပြောတော့ အဖေက “ မေကြီးကလည်း သားနဲ့သမီးက နေစေချင်လို့ပြောနေတဲ့ဉ္စာကိုး´´ ဆိုတာနဲ့ ဒီညတည်းဖို့ အစီအစဉ် ဖြစ်မြောက်ခဲ့တယ်လေ။
ဒါနဲ့ဘဲ မနက်စား စားပြီးပုဂံဆေးနေတဲ့ ကျမနားကို မောင် ရောက်လာပြီး
“ ငယ် ဖေနဲ့မေ ကို ဧည့်ခံ စကားပြောနေအုံး၊ မောင် ဈေးလေးပြေးပြီး လိုတာလေးတွေ ဟင်းစားလေးတွေ သွားဝယ်လိုက်အုံးမယ်´´ ပြောတော့ “ငယ် လိုက်ခဲ့ပေးမယ်´´ပြောတာကို “ ငယ်လိုက်တော့ ဖေနဲ့မေ ဘဲထားခဲ့ ရမှာ ဘယ်ကောင်းမလဲ မောင် ဘဲသွားလိုက်ပြီး အဆင်ပြေတာ မြန်မြန်ဝယ်ပြီးပြန်ခဲ့မယ်´´ ဆိုကာ ဈေးခြင်းလေးဆွဲလို့ အိပ်ရှေ့ခန်းမှာရှိနေတဲံ ဖေနဲ့မေ ကို ပြောဆိုပြီး တိုက်ခန်းကထွက်သွားတဲ့ မောင့် ကျောပြင် ကိုငေးနေမိရင်း –
“အော် မောင် ရယ် ´´ လို့ဆိုပြီး အခုလိုဂရုစိုက်တဲ့မောင်ရဲ့ အပြုအမူလေးကို ရင်ထဲဝမ်းသာနေမိရင်းပြုံးလိုက် မိတယ်လေ။ တစ်ခါတုန်းက ရည်စားဘဝ အဖေနေမကောင်း လို့ဆေးရုံတက်ရတုန်းက မောင် နေ့လည်ထမင်း စားချိန်မတိုင်မှီ ရုံးကနေခဏထွက်လာရင်း အဖေအတွက် မြူစွမ်ကြက်စွတ်ပြုပ်ထုပ်လေး ကျမကိုပေးရင်းနဲ့ အဖေအားရှိအောင်ရယ် အစာပျော့မို့အစာကြေလွယ်လို့ ဝယ်လာတာပြောခဲ့တဲ့ ဂရုစိုက်မှု့လေးကို သတိရမိ လိုက်တယ်လေ။ အဲဒီနေ့က မောင် ဝယ်လာတဲ့ဟင်းစားတွေ ကိုကျမကချက်တော့ မောင် ကလည်းကူလုပ်ပေး နေတာနဲ့ အမေလည်းမနေနိုင်တော့ဘဲ သူပါဝင်ချက်ကာ ပျော်ပျော်ပါးပါးစားကြ စကားပြောကြနဲ့ ကျမတို့အိမ် လေး စည်းကားစွာပျော်ခဲ့ရတယ်လေ။
ကျမတို့နှစ်ယောက်လုံး ကုမ္မဏီတွေမှာအလုပ်လုပ်ကြပြီး မနက်ဆို ရုံးကား(ဖယ်ရီ)က တိုက်ခန်းအောက်လာ ကြိုပို့မို့ အလုပ်သွားအလုပ်ပြန်အဆင်ပြေခဲ့ကြကာ ရုံးသွားချိန် ရုံးပြန်ချိန် ကျမတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ဖယ်ရီကား များ ရှေ့ဆင့် နောက်ဆင့်ရောက်တတ်ကြတယ်လေ။ တစ်နေ့မှာတော့ မောင် က မနက်ရုံးမသွားမှီ မနက်စာ စားရင်း –
“ ငယ် ဒီနေ့ညနေ ရုံးဆင်းရင် ဖယ်ရီကားကို မြေနီကုန်းဒဂုံစင်တာရှေ့မှာဘဲရပ်ခိုင်းပြီးဆင်းလိုက်နော် မောင် လည်းအဲဒီမှာဘဲ ဆင်းပြီး ဒီညနေအမေတို့အိမ်သွားရအောင်နော်၊ အမေက မနေ့က ရင်ကြပ်လို့ ကောင်း ကောင်းနေမကောင်းချင်ဘူးဆိုတာ မနေ့ညက ဖုန်းဆက်ရင်းညီမလေးပြောလို့လေ´´ ဆိုတော့
“ ရတယ်လေ၊ အဲဒါဆို အဲဒီနားက ညနေစောင့်နေလိုက်မယ်လေ ´´ လို့ဆိုပြီး ညနေကြ မောင်နဲ့ချိန်းထားတဲ့ မြေနီကုန်းဒဂုံစင်တာရှေ့ နေရာမှာဆုံဖြစ်ပြီး မောင် မိဘတွေနေတဲ့ ရှင်စောပုလမ်းကအိမ်ကို လမ်းလျှောက် သွားဖြစ်ခဲ့ပေါ့။ မောင် မိဘ တွေအိမ်ကိုရောက်ရင်ဘဲ မောင်က လက်ထဲကကိုင်လာတဲ့ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ထုပ် လေးကို ဧည့်ခန်းမှာထိုင်နေတဲ့ မောင် အမေရှေ့က စားပွဲပေါ်တင်ရင် –
“အမေနေသိပ်မကောင်းဘူးဆိုလို့ အမေသမီးက ဝယ်လာပေးတာလေ ´´ ဆိုတော့ မောင်အမေက
“ အလားကားဒုက္ခခံလို့သမီးရယ် ရုံးတဖက်၊ အိမ်အလုပ်တဖက်နဲ့ မအားရတဲ့ကြားထဲမှာ အမေက ဟိုနေ့က ညနေဖက်ရေချိုးနောက်ကျပြီး အအေးပတ်လို့ ရင်ကြပ်တာပါ အခုတော့ သက်သာ ပါတယ်´´ လို့ဆိုတော့ မောင်က –
“ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အမေအားရှိအောင် အမေ့သမီးက သောက်စေချင်လို့ ဘရင်းကြက်ပေါင်းရည်ဝယ်လာတာဘဲ အမေကလည်း´´ ဆိုလိုက်ပြီး သားအမိနှစ်ယောက် စကားဆက်ပြော နေတဲ့ မောင် ကိုကြည့်နေမိရင်း ကျမ စိတ်ထဲ –
“ အော် မောင် ရယ် ´´ လို့ရေရွတ်မိကာ ဒဂုံစင်တာရှေ့ ကျမအရင်ရောက်လို့ မောင်ကိုစောင့်ဖြစ်ပေမယ့် နေမကောင်းတဲ့မောင်အမေအတွက် အခုလို တစ်ခုခုဝယ်သွားရကောင်းမှန်းမတွေးမိခဲ့တဲ့ ကျမအဖြစ်နဲ့ ယောက်ခမ နဲ့ ချွေးမအဆင်ပြေအောင် ပြုမူခဲ့တဲ့မောင်လုပ်ရပ်အပြောတွေကို တွေးမိရင်း စိတ်ထဲအလိုက်မသိတဲ့ ကိုယ်ပါလားလို့ ကျမကိုယ်ကျမ အပြစ်တင်နေမိကာ တစ်ခါတုန်းက ရည်းစားဘဝ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲကအပြန် အဌားကားပေါ်မှာ မောင် ပြောဖြစ်တဲ့ စကားလေးတွေကို ပြန်သတိရမိခဲ့တယ်လေ။ အဲဒီတုန်းက မောင် ပြောဖြစ်ခဲ့တာက-
“ ငယ် ရေ အိမ်ထောင်တစ်ခုပြုကြတယ်ဆိုတာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး လက်ထပ်ကြပြီး အဲဒီနှစ်ယောက် အတူတကွ ပေါင်းဖက်နေသွားကြတာမဟုတ်ဘူး၊ တကယ်အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ ပေါင်းဖက်ကြတဲ့ နှစ်ယောက်အပြင် သူ့အသိုင်းအဝိုင်း ကိုယ့်အသိုင်းအဝိုင်း သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် အဲဒါတွေပါ မခေါ်ချင်ပေမယ့် မတော်ချင်လို့မရ ဆိုသလိုမျိုး ပေါင်းသင်းကြရတာမျိုးလေ၊ အဲဒီတော့ သူဘက်ကိုယ်ဘက် ဘက်မျှညီအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း သည်လည်း အိမ်ထောင်တစ်ခုအတွက် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စရာပါဘဲ´´ တဲ့လေ။
အခုလည်း နှစ်ဖက်မိဘအသိုင်းအဝိုင်းကို သင့်လျော်စွာစွမ်းဆောင်ပေးနေတဲ့ အော် မောင် ရယ် ။
အိမ်ထောင်သည်ဇနီးမောင်နှံများ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာနေထိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒမွန်ဖြင့်———-။
အော် လေးခရယ် လေးခရေးလိုက်မှဘဲ ဒီဘဝက ကျွတ်ချင်လာပြီ :harr:
ဦးဆုံးကွန်မန့်ပေးသူ koyinmaung ရေ ကျေးဇူးပါနော်။
မဗုံဗုံရေ ခင်ခရဲ့ အတွေးလေးကို အရေးလေးတွေ အဖြစ်ရေးဖြစ်တာပါဗျာ။ ကိုယ့်တွေ့တော့ မဟုတ်လို့ အရေးမကောင်းရင်လည်း သီးခံပါလို့။
ကျွန်တော်လည်း ဗုံဗုံ လိုပဲထင်ထားတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတော့
ကူညီပါရစေ ကူညီပါရစေ ခင့်ဗျ။
ကျက်သရေ မင်္ဂလာရှိလှတဲ့ ဒီမနက်ခင်းလေးမှာ မောင်
ခေါ်တာတွေ ခေတ်စားနေပါလားဗျာ …
ကြည် နူး စရာ ကောင်း တဲ့ ပိုစ့် လေး ပဲ နော်။ လူသား ၂ ဦး ပေါင်း စပ် ခြင်း ဆိုတာ အသိုင်း အဝိုင်း ၂ ခု ပေါင်း စပ် ခြင်း ပဲဆိုတော့ လက် တွေ့ မှာတော့ ချော မွေ့ ဖို့ နည်းနည်း ခက်ခဲ တယ်။
ဒီ ဇာတ်ကောင် တွေ ဟာ အပြင် သာ တကယ် ရှိ တဲ့ သူတွေ ဆို ရင် ခု လိုပဲ အမြဲ ချော မွေ့ ပါ စေ လို့ ဆုတောင်း ပေး ချင်ပါ တယ်။
မောင့်ကျက်သရေ ဂီ့ ရေ ကျိကျိကို ဖုန်းအဆက်မှာ ဆက်သွယ်မှု့ဧရိယာပြင်ပရောက်နေကြောင်း
မိုချိုခင်ဗျ ကျွန်တော်လည်း ဒီဇာတ်ကောင်တွေအတိုင်း အပြင်မှာတကယ်တာရှိကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့် အတွေးနဲ့ ရေးလိုက်မိတာပါ။ ပြီးတော့ အိမ်ထောင်သည်ဇနီးမောင်နှံတိုင်းကို သာယာပျော်ရွှင် စေချင်တာလည်းပါလို့ပါ။
အကျိုးပြုရသစာပေလေးက စာဖတ်သူကို အေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့ ဘဝ ထူထောင်နိုင်အောင် ချိုချိုသာသာနဲ့ စည်းရုံးသိမ်းသွင်း နိုင်ပါပေတယ်။ :hee:
ဝင်ရောက်အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ အမ မမ ရေ။
အိမ်ထောင်စုတိုင်းမှာ အဲ့လိုသိတက်တဲ့ ခင်ပွန်း /ဇနီးကိုသာ ရထားကြမယ်ဆိုရင်တော့
အတိုင်းထက်အလွန်ကို သာယာတဲ့ မိသားစုဘဝလေးတွေဖြစ်ကျမှာပေါ့နော်
ကိုခင်ခရေ…အဲဒီလို“ မောင်” ဖြစ်အောင်
အိမ်ထောင်သည်တွေအတွက် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးနဲ့ရသလေးကို ခံစားအားပေးသွားပါတယ်ရှင်။
အခုလို အပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိဖို့အတွက် ငွေရေးကြေးရေးအဆင်ပြေကြဖို့လည်းလိုတယ်နော်။
မိသားစုစီးပွားရေမပြေလည်ကြရင် နှစ်ဘက်မိဘဆွေမျိုးတွေအပေါ်လည်း မသထာနိုင်ကြတာ သဘာဝပေမို့လား။
မနိုဗွီတို့ မိသားစုလေးလည်း ဘက်မျှညီလို့ သာယာတဲ့မိသားစုလေးဖြစ်ပါစေနော်။
ကောင်းတာပေါ့ဗျာ ကိုကြီးမိုက်ရဲ့ ကြိုးစားမှု့လေးအောင်အောင်မြင်မြင်ဖြစ်မြောက်ပါစေလို့နော်။
တစ်ဦးကို တစ်ဦးဖေးမမှု့၊ ကူညီမှု့၊ ကြင်နာမှု့ နဲ့ အပြန်အလှန်နားလည်မှု့ အတွက် ငွေးကြေးဓန ပြည့်စုံမှု့
နဲ့တော့မဆိုင်ဘဲ စိတ်ထားတတ်မှု့နဲ့ဘဲ သက်ဆိုင်မယ်ထင်ပါတယ် နန်းတော်ရာသူရေ။ တစ်ချို့ လက်လုပ် လက်စားဘဝနဲ့ ဘဝကိုရပ်တည်နေတဲ့ ဇနီးမောင်နှံတွေမှာ တစ်ဦးကိုတစ်ဦးကြင်နာ နားလည်မှု့ပေးကြတာ
အော် … မောင်ရယ်
ဆောင်းတွင်း နေပူစာ လှုံရင်း ဖတ်သွားပါတယ်ဗျို့
နဂိုကတည်းက အတွေးကောင်း အရေးကောင်းမို့ ဘယာကြော်ပါ အူး၄ရေ
အော်..မောင်ရယ်…ဆိုတော့ မောင့်ကို အော်ခိုင်းနေတာလားမသိ..
နူးနူးညံ့ညံ့နဲ့ ရင်ထဲရောက်ရသွားတဲ့ ‘ ဪ..မောင်ရယ် ‘ ကို အားကျသွားလို့
‘ ဪ..မေရယ် ‘ တောင် ဖြစ်ချင်မိသွားတယ်…
ဝင်ရောက်အားပေးသူ ကိုရဲစည်ရေ ကျေးဇူးဗျာ။ မန်းရောက်ရင် ဆက်သွယ်အုံးဗျာ တွေ့ဆုံကြတာပေါ့။
ဪ နှင်း ရယ် မှားတဲ့အခါလည်းမှားပေမပေါ့နော်။ အော် = ဪ ဟု အမှန်ဖတ်ပေးကြပါခင်ဗျ၊ ခေါင်းစဉ် သတ်ပုံမှားကို ပြင်လိုက်ရင် မနှင်းနှင်း မန့်ထားတာနဲ့ လွဲနေမှာမို့ မပြင်တော့တာကို ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါဗျ။
ကိုခင်ခရေ ဖတ်ရှူအားပေးသွားပါတယ်နော် ….
အော် ….. မောင်ရယ် …….
မောင် လို့ခေါ်ချင်ပေမယ့် … အခေါ်ခံတဲ့သူက “ကို”လို့ခေါ်ခိုင်းတယ် … မောင် ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးက လေးနက်တယ် … ချစ်ရာကောင်းတယ်လို့ထင်မိတယ် … အခုတော့ “ကို” ရော“ မောင်” ရော မခေါ်ဖြစ်ပဲ … နံမည်လေးကိုသာခေါ်ဖြစ်တယ် … အော် ေ-ာင် … ရယ် ……
ဇာတ်လမ်းလေးကို ခံစားဖတ်ရှုသွားပါတယ် … ဒီလိုညှိဖို့ကတော့ နည်းနည်းလေးခက်လိမ့်ပါဦးမယ်လို့ ထင်တယ် ……..
အော် ကိုခင်ခရယ် ကိုယ်တွေ့မဟုတ်ပေမဲ့ရေးတတ်လိုက်တာ အားပေးသွားပါတယ်နော် ……
တကယ့်ကို romantic ပါပဲ လေးခ ရေ
ကိုယ်တွေ့များဆို ကြွေဆင်းလာလောက်အောင် ဖွဲ့ထားလိုက်မယ့်ဖြစ်ခြင်း..
ရွားစားကျော်တို့လည်း ရည်းစားဘဝနဲ့ အိမ်ထောင်ဦးတုန်းကတော့ ကိုရေ ချိုသည်းရေ ခေါ်တာပေါ့ဗျာ
နည်းနည်းကြာလာတော့ ယောက်ျားရေ၊ မိန်းမရေ ပြောင်းလာရော
သားလေးမွေးပြီး စကားစပြောတော့ သူက အောက်ကျားရေ.. အိန်းမရေ လိုက်ခေါ်လို့
ခုတော့ ဖေကြီး မေကြီးဆိုတဲ့ နာမ်စားတွေသာ သုံးနေရတော့တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း
အဲဒီလို ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သာယာနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဗျာ
မန်းကလေးတစ်ယောက် နေရာကရေးသွား တာလေး ။
တကယ့် အိမ်ထောင်ရှင်မ တစ်ယောက်များ.လား..လို ့လေးလေးခ ကို ထင်သွားတယ် ။